महानायक राजेश हमालको आज जन्मदिन – दिनुहोस् शुभकामना ! « Media for all across the globe
महानायक राजेश हमालको आज जन्मदिन – दिनुहोस् शुभकामना !
सर्वप्रथम सन् १९८५ मा भारतको फेसन नेट म्यागजिनमा र सन् १९८६ मा नेपालको काठमाडौंमा र्‍यापमा हिँडेर ग्ल्यामरमा प्रवेश सुरू गरेका थिए । एक वर्षमा उनले औसत १०-१२ वटा सम्म चलचित्रहरूमा उनले अभिनय गर्ने गरेका छन् भने सन् १९९४ मा उनले १६ वटा चलचित्र सम्ममा अभिनय गरेका थिए । कुनै समय नायक हमाल दैनिक १८ घन्टासम्म काम गर्थे ।
साथै नेपाल रैबार परिवारको तर्फबाट नेपाल चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमाललाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना ।